पहिलो त्रैमासमा लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा घट्यो
कात्तिक २६, काठमाडौं । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ७९ प्रतिशत कमि आएको छ ।
कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ३ करोड १७ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. २ करोड ७७ लाखमा सीमित भएको हो । कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्याएकाले नाफा घटेको हो ।
कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ९८ लाख २५ हजार छुट्याएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ४ करोड ३१ लाखभन्दा बढी छुट्याएको छ ।सोही कारण कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा १२ प्रतिशतले घटेको हो ।
चुक्तापूँजी रू. २७ करोड ८३ लाख रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. २७ करोड १७ लाख सञ्चित गरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. २ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख सापटि लिएर, रू. १ अर्ब ६९करोड ७७ लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. ४ अर्ब ७९ करोड ५९ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
सोही अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३९ दशमलव ८२, मूल्य आम्दानी अनुपात २७ दशमलव ६३, तरलता अनुपात ६ दशमलव ५० प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १९७ दशमलव ६५ रहेको छ ।
आगामी सातादेखि नेपाल–भारत नियमित उडान[२०७७ मंसिर, १७]
जगदम्बा मोटर्स प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक नियुक्त[२०७७ मंसिर, १७]
ज्योति विकास बैंकले सुरु गर्‍यो स्क्यान एन्ड विथ्ड्र सेवा[२०७७ मंसिर, १७]
१९ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीद्वारा ८ अर्ब १० करोड २२ लाखभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन[२०७७ मंसिर, १६]
प्रोटोन कारको शोरुम काठमाडौंमा[२०७७ मंसिर, १६]
उतारचढाबका बीच मंगलवार दुई हजार विन्दुमा पुगेर बन्द भयो नेप्से[२०७७ मंसिर, १६]
माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ बुधवार बाँडफाँट हुँदै[२०७७ मंसिर, १६]
तेस्रो घण्टामा २.९५ अंकले बढ्यो बजार, ५ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री (२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १६]
फरवार्ड कम्युनिटीको ३२.५० % बोनस शेयर सूचीकृत [२०७७ मंसिर, १६]
विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमको प्रभावकारिता
प्राकृतिक व्यक्तिलाई पूँजीगत लाभकर
२ सातामै रू. १४ अर्ब कर्जा प्रवाह
सुस्तायो ठूला आयोजनाको गति
पूर्वाधार ठेक्काको म्याद थपमा पुनः किचलो